हरेक नेपालीको टाउकोमा ४६ हजार ७ सय ऋण - Khabar Break
संघीय सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण १४ खर्ब पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको आर्थिक बुलेटिन अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारको आन्तरिक र बाह्य गरी कुल १४ खर्ब ९६ करोड ५६ लाख ऋण पुगेको हो ।
तीन करोड नेपालीलाई भाग लाउँदा हरेक नेपालीको टाउकोमा ४६ हजार ७ सय रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यद्यपि यो ऋण नेपाली जनताले प्रत्यक्ष तिर्नुपर्दैन ।
यस अवधिमा सरकारको आन्तरिक ६ खर्ब ७० अर्ब १४ करोड तथा बाह्य ऋण ८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रहेको छ । आन्तरिकतर्फ १२ अर्ब २३ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ भने बाह्य ऋणतर्फ साँवा २९ अर्ब ५६ करोड तथा ब्याज २ अर्ब ६२ करोड गरी ३२ अर्ब ५६ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै यसै अवधिमा कुल २७ अर्ब २४ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षकै मंसिर मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख वैदेशिक अनुदान भित्रिएको छ । यसै वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा २० अर्ब ९१ करोड ८६ लाख वैदेशिक ऋण भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । -इमेजखबरबाट साभार
आजको नेप्से : दुई दिनमा ८० अंकले घटेको सेयर बजारमा ९० अंकको उछाल
तीन वर्षमा ३६ अर्ब ६१ करोड राजस्व चुहावट
ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति पुग्यो भाउ ?
नेप्से २५१५.०३ विन्दुमा, ५ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री
बढ्यो सुनको मूल्य, तोलामा कति पुग्यो भाउ ?
बजारमा ४५ अंकको गिरावट, कारोबार रकम ६ अर्बमा सिमित
सुनको मुल्य ५ सय रुपैयाँले घट्यो, कति छ तोलाको भाउ ?